ဓာတ်သေပညာကျမ်း (အပိုင်း ၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဓာတ်သေပညာကျမ်း (အပိုင်း ၂)
ဓာတ်သေပညာကျမ်း (အပိုင်း ၂)
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on Jun 3, 2013 in Photography | 30 comments
အိတ်စပိုရှာဆိုတဲ့ အလင်း/အမှောင်ကို ကင်မလာထဲမှာ ပါတဲ့ ပုံရိပ်ဖမ်း ဆင်ဆာထဲကို လိုအပ်သလို ရစေဖို့ အဓိကဆောင်ရွက်ပေးမှာ ကတော့ ကင်မလာမှာ ပါတဲ့ ရှက်တာ (shutter) နဲ့ မှန်ဘီလူးမှာ ပါတဲ့ အပါချာ (aperture) ပေါက် တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံရိပ်ဟာ မှန်ဘီလူး ထဲက ၀င်လာပြီး အပါချာကို ဖြတ်ပြီး ကင်မလာထဲက ပုံရိပ်ဖမ်းဆင်ဆာ ကိုရောက်ပါတယ်။
လန်းစ်တွေကိုပြောမယ်ဆိုရင် ကင်မလာ အသေးလေးတွေမှာ တော့ တွဲရက်ပါတဲ့လန်းစ် တစ်ခုပဲရှိ ပြီး DSLR ကင်မလာ အကြီးတွေမှာ ကတော့ အလတ်၊ အတို၊အရှည်၊ အကြီး၊ ဆိုပြီး အမျိုးမျိူး ရှိပါတယ်။
prime, kit, normal, tele, wide, super wide, fish eye, micro စသဖြင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အမျိုးမျိုး သော လန်းစ် တွေကို အမျိုးမျိုးပြောင်းရိုက်ရတာလဲ DSLR ကင်မလာ သမားတွေ အတွက် အတော်ကြီးတဲ့ ဒုက္ခပါ။ (DSLR: Digital Single Lens Reflex camera) အဲလိုလန်းစ်တွေဟာ focal length ပေါ်မူတည်ပြီး ရိုက်ရတဲ့ အမျိုးအစားကွာသွားပါတယ်။
ထားပါလေ ကင်မလာအသေးတွေမှာ တော့ လိပ်ခေါင်းလန်းစ် လေးတစ်ခု (ထွက်လိုက်/၀င်လိုက် မို့လို့ လိပ်ခေါင်းလန်းစ်ဟုခေါ်မည်။) အဲသဟာလေးနဲ့ အနီးရိုက်ရိုက်၊ အဝေးရိုက်ရိုက် အိုကေသည်။
pro လုပ်​မယ်​ဆို ပိုက်​ပိုက်​ အ​တော်​ထွက်​မဲ့ အလုပ်​ပဲ။အရင်းအနှီးအ​တော်​ကြီးတဲ့ လုပ်​ငန်းဖြစ်မယ်​။
လက်စသပ်တော့ တူမဆီက အမွေရထားတာ Kit Lens ကိုး။
kit lens လို့ ခေါ်တာ ဂလို ..အန်ကယ်ဒုံရဲ့ …
သူက ကင်မလာ ဘော်ဒီဝယ်ရင် တွဲပါတတ်တဲ့ kit မို့ ခေါ်တာ
(ကျော့် အသီးကျော်လေး kit kit နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ကြောင်း သိစေအပ်ပါသည်)
သူ့ကို နောက်တနည်း multi-purpose lens ထသွားထလာ ရိုက်တဲ့ပြောင်း
normal lens လို့လည်းခေါ်တတ်ကြသေးရဲ့ …။
kit lens ပျက်တဲ့နေ့ သူနဲ့ လုပ်လို့ရတဲ့ လစ်မစ်တွေကို မြင်ပြီး နောက်တခုခု ၀ယ်ဖို့ ချောင်းတဲ့နေ့က
ဖိုတိုဂလပ်ဖီ ပညာနောက်တဆင့်တက်တဲ့နေ့ လို့သာမှတ်ပေတော့ဗျို့ ..
ဆြာ့ဆြာဂျီးဒွေက ပြောတာကတော့ ကစ်ဒ် လန်းစ် တလုံးဖျက်ဆီးပြီးလောက်မှ ဖိုတိုဂလပ်ဖီ တတ်တာ လို့ အဆိုရှိပါဒယ်။
ဒါမိုးလေး ရှာဝယ် သဂျီး ..၁၀ဒေါ်လှ လောက်ပဲချိဒါ.. အဲ့ဒါမိုးလေးကို ကစ်လန်းစ်မှာ တပ်ရင် မန်နျူရယ် မက်ခရိုလန်းစ် ဖစ်တယ်..ကွိကွိ…။
ကစ်လန်စ်း ကို တယ်လီနဲ့ ၂လုံးပူး ပြောင်းပြန်ပြန်တပ်ပြီးတော့လည်း မက်ခရိုရိုက်လို့ရတယ်.(အဲ့နည်းက ပို ဒုက္ခများပါတယ်..)
၂နည်းစလုံးကတော့ မြန်မြန်ကန်းဖို့ နီးပါတယ်ခီညော်…
ကောင်းပါတယ်ဗျာ အဲလိုလေး ၀င်ရှင်းပေးတော့ အနော်က သိပ်မ၀င်ဖြစ်လို့
ဆြာအုပ်ရဲ့ ပညာတွေထဲမှာ မှတ်မိအောင် နာမည်ပေးတာလည်း တစ်ခုအပါအ၀င်ပဲ။
လိပ်ခေါင်းလန်းစ်လို့ ပြောတာနဲ့ ထင်းကနဲ ရှင်းကနဲ မြင်မိပြီး ပြုံးမိသွားတယ်။
အီခု ဓာတ်သေ ပညာ အပိုင်း ၂ ကိုလည်း
မပျက်မကွက် လာရောက် တက်သွားပါအိ …
ဒီထဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မျင်မိတွားဒါဂဒေါ့
ဟို .. လိပ်ခေါင်းလန်းစ် ဆိုဒါဗျဲစ် …
ကျွန်တော်မှာလဲ လိပ်ခေါင်းလန်း နဲ. ဆိုနီ မိုးကျော် ကင်မလာလေးရှိတယ်…
ကဘာ မှာ မဝင်နိုင်လို့ ဝင်လို့ ရတဲ့ နေရာကို ပူဆာ နေတာဟေ့။
ပြပွဲ အတွက် စီစဉ်သူတွေ စကြရင် အနော်လဲ ၀င်ပါပေးပါမှာပါ အရီး
ဆြာအုပ်ရေ ၀င်ဝင် လျှာရှည်နေတာ စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင် ခွင့်ပြုပေးလို့ ကျေးကျေးခည…
အရီး ပြောနေတဲ့ ပြပွဲဆိုတာ ဂလိုဗျ ..ဆြာအုပ်ကို ဦးစီး ပေးပါလို့ ရည်စူးပြီးပြောနေတာ
အရင်နှစ်က လုပ်ခဲ့ဖူးပေမယ့် မူရင်း အိုင်ဒီယာ ဆြာသမားရော .. နောက်ဆုံးလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လရဲ့
ပိုစ့်ပိုင်ရှင် ဆြာသမားပါမရှိတော့လို့ မဆက်ဖြစ်တာဗျို့ … ကျုပ်ကလည်း ပီစီပျက်ပြီး တနှစ်လောက်
စနပ်စိ နဲ့ ကိုယ့်ပုံကိုယ် မနဲပြင်နေရတာ … (ပုံတင်ဖို့ ဝေါ့ပရက်စ် အပ္ပလီတောင် သွင်းရသေး)
ဆိုတော့ .. တာဝန် မယူပေးနိုင်ခဲ့ဘူးခည…ခုလည်း တက်ဘလွတ်နဲ့ ကတ်တွေ ပြည့်ကုန်လို့သာ
ပီစီဝယ်လိုက်တယ် ၆၄ဘစ် ဖြစ်နေလို့ .. ဖိုတိုရှော့ လိုင်စင် ပေးတဲ့လူရှိတာတောင် ၃၂ မို့ သုံးမရ ဂွကျ…
၀ယ်ဖို့ ခြမ်းဖို့ လုပ်နေရ… ပိုဆိုးတာက ပြတင်းပေါက် ၈ မို့ မြန်မာစာ ရိုက်မရသေး (ရှာရဦးမယ်)
သည်လိုအနေအထားမှာ ဖတ်ရွေး လုပ်ကြ ကဗျာပြခန်း လုပ်ကြ နဲ့ အချိန်မှာ ရွာ့လူကြီးတချို့ က ဒါ့ပုံလည်း ပြန်စချင်တယ်
ပြောလာတယ်ခည … ဟိုဆြာ၂ယောက်က မရှိတော့တဲ့အပြင် ကျော်ကလည်း ကိုယ့်အခက်အခဲနဲ့မို့ ငြင်းလိုက်ပါတယ်ဗျို့..
(ခုလို အသေးစိတ်တော့ ရှင်းမပြခဲ့ဖြစ်) .. ကနေ့နက်ဖန် တက္ကနစ်ကယ် ဒစ်ဖစ်ကယ်လ်တီ ပြေလည်ရင်တောင်
အမျိုးတွေ ရောက်နေလို့ သည်လကုန်ထိတော့ ခရီးယာယီ များနေဦးမှာမို့ ဆြာအုပ် ဦးစီးပေးနိုင်ရင် နောက်ကနေ
ပံ့ပိုးပါ့မယ်ဗျို့ …။ ဆြာနဲ့ အရီးတို့ သဂျီးတို့ ဒီတေးလ် ဆွေးနွေးကြပါဗျားးးး..။
အင်း .. သဟာဆိုရင်တော့ လုပ်တာပေါ့ဗျာ.. ဒါပေမယ့် ကျနော်ကလဲ ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်နေတော့ ဂွကျ သဗျို့.. ရုံး မှာကလည်း နောက်ကျကျနေ.. အိမ်မှာကလည်း ကွန်မကောင်းတော့ အဲလိုဖြစ်နေတာမို့လို့ပါ.. တာဝန် ယူရမယ်ဆိုရင်တော့ ကြိုးစာပြီးလုပ်ကြည့်ရမှာ ပေါ့ဗျာ.. ဒါဆိုလဲ သဂျီးတို့ကပြောလိုက်ပါဗျာ.. စကြတာပေါ့
ဆြာအုပ်..ဘယ် လန်းစ် က နိုက်ဗီးရှင်းအတွက်ကောင်းလည်းဟင်။ လိပ်ခေါင်းလန်းစ်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့နိုက်ဗီးရှင်းကဇွန်းဆွဲရင်တော်တော်ကြည့်ရဆိုးတယ်။
နိုက်ဗီးရှင်း အတွက်က အပါချာနဲ့ဆိုင်ပါသဗျို့.. အပါချာ အကြောင်းကိုတော့ နောက် အပိုင်းတွေမှာ ရှင်းပြပေးပါမယ်
ဆြာအုပ် ပြောတဲ့ လိပ်ခေါင်း လန်းစ် တပ် ကင်မလာလေးတွေ
ဇွမ်း ဆွဲတဲ့အခါ ဇွမ်း ဘယ်လောက်ဆွဲထားပြီ ဆိုတာကို ပြတဲ့ ဘားလေး စကရင်ပေါ်
အဲ့ဒါကြောင့်ဗျ.. သူ့မှာ လိပ်ခေါင်းမှမရှိတာကော…Digital Zoom နဲ့ပဲ ပုံကို ဆွဲဖြဲ သလို ဖြစ်နေတာကြောင့်ရယ်ပါ။
လိပ်ခေါင်းနဲ့ DSLR အခေါ်အဝေါ်အယူအဆ နဲ့ စံ Unit တွေ မတူဘု ခည(ဆြာအုပ်နောက်ပိုင်း ရေးပါလိမ့်မယ်ခီညား)
ရှားလော့ဟုမ်း လန်းစ် မထွက်သေးကြောင်းမှတ်သားသွားပါကြောင်း
တက်ရောက်သူများ အားလုံးကို စာရင်းပြုလုပ်ထားပါဂျောင်း
ကျောင်းခေါ်ချိန် ၇၅% မပြည့်သူများ စာတီဖီကိတ်ရမှာ မဟုတ်ကြောင်း
ပုံ/ ကြောင်အုပ်ကြီး အုပ်အုပ်
အုပ်အုပ် ….. ဒဲ့ ..
ဟိုတစ်ယောက်က တိုက်တိုက် …
ဒီတစ်ယောက်က အုပ်အုပ် …
ပေါင်းလိုက်တော့ အုပ်တိုက် .. တိုက်အုပ် …
ဟုတ်ဒေါ့ ဟုတ်နေဘီ …
အေးအေး အဲဒီ တိုက်အုပ် က နီကို ၀ိုင်းရှင်ပြုပေးလိုက်မှဖင့်……… ဟင်းဟင်းဟင်း
ဟုတ်ပ ကျူပ်လဲ ရဟန်းဒဂါ ဖြစ်ချင်နေတာနဲပ အတော်ပဲ
ဗဟုသုတ အလို့ ငှါ ဖတ်ရှု သွားပါတယ် ကိုအုပ်လှကြီး
အတန်းပျက်တယ်ဆိုပြီးဆာတီဖိကိတ်မရမှာစိုးလို့ အတင်းဒန့်လက်မှတ်လာပြန်ထိုးသည်..။ဗပဘေပေ့…ဂျိ ။